Ndị na-ede blọgụ nwere ike ịghọ Ala nke Anọ? | Martech Zone
Ndị na-ede blọgụ nwere ike ịghọ Ala nke Anọ?
Bọchị Sọnde, Machị 8, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nobility bụ Ala nke Mbụ, Chọọchị bụ Nke Abụọ, Ndị mmadụ bụ nke Atọ… na A na-eche na akwụkwọ akụkọ bụ Estate Anọ. Ka akwụkwọ akụkọ malitere ịmasị ịbụ ndị na - eche nche maka ndị mmadụ na - kama - na - elekwasị anya na ịba uru, ndị na - ebipụta akwụkwọ malitere ile akwụkwọ akụkọ anya dị ka ihe nzacha n'etiti mgbasa ozi karịa nzube nke ndụ.
Anyị na-aga n'ihu na-ahụ ọnwụ nke akwụkwọ akụkọ n'agbanyeghị na ikike nke akwụkwọ akụkọ anaghị ahapụ - naanị uru bara. Na nche ọnwụ ọnwụ nke akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu. Ọ na-ewute m ịhụ ka ọtụtụ ndị odeakụkọ nwere ọgụgụ isi na-eme nchọpụta na-efunahụ ọrụ ha. [Foto si n'aka The Economist]
Onwere onye odeakụkọ na mmemme mere n’oge gara aga nke m gwara okwu wee jụọ m ụwa ọ ga - ede blọgụ gbasara ya ma ọ bido. Agwara m ya na m lere ịde blọgụ na akwụkwọ akụkọ anya dị ka ụzọ nkwurịta okwu abụọ dị iche iche. N'uche nke m, onye na - ede blọgụ bụ onye na - ekerịta onyinye ya ma ọ bụ ahụmịhe ya n'ịntanetị. De blọgụ nwere nnukwu ewu ewu n'ihi na ọ na-egbubi onye na-emepụta ihe, onye editọ na onye nta akụkọ… ma tinye ndị na-ege ntị n'ihu ọkachamara ahụ.
Yabụ kedu ihe onye nta akụkọ ga-ede?
Akwadoro m ya ka o tinye blog banyere oru nta akuko. Ndi oru nta akuko bu ndi nwere amamihe na ndi obi siri ike. Ha na-akọ akụkọ ha oge, na-arụsi ọrụ ike ma na-egwu ala iji kpughee eziokwu. Agbanyeghị na ndị na - ede blọgụ na-eme ozi ọma site n’oge ruo n’oge na ha bụ ndị nche, ekwetaghị m na enwere ụfọdụ aka nwere ike ịba uru na ndị nta akụkọ nwere - ọ bụghị naanị mgbe ha na-ede ihe, kama ha gafere n’apịtị ahụ wee rute eziokwu.
Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị odeakụkọ ga-ekerịta ihe ọmụma ha banyere ọrụ ha site na blọgụ - yana ụfọdụ nghọta na akụkọ ndị ha na-arụ na - ma nye ohere iji zụọ ma debanye ndị na-ede blọgụ, enwere ike inwe olile anya maka ụlọ nke anọ ga-ebi. Enwere m olile anya na ọ bido blog ma bido kụzie akwụkwọ ndị ọzọ niile gbasara otu anyị ga - esi bụrụ ndị nche kacha mma.
Ọ bụ ụwa dị egwu na-enweghị Ala Anọ. O doro anya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị hapụrụ ọtụtụ ọnọdụ ọnwa gara aga dị ka akara ngosi dollar, ndị na-ekenye ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị weghaara mkpa ọ dị nnukwu akụkọ nta akụkọ. Anọ m ebe ahụ mgbe anyị malitere ịkpọsa akwụkwọ akụkọ maka ọtụtụ coupons dị na ya ọ bụghị ndị odeakụkọ nwere ọgụgụ isi nyere gị ohere.
Geoff Livingston dere na mbido afọ a na ndị mgbasa ozi nwa amaala bụ The Fifth Estate. Ikekwe nke ahụ bụ eziokwu, mana echeghị m na anyị nwere ụzọ ọ bụla tozuru oke ịrụ ụdị ọrụ a.
Lelee Usoro Ọdịnaya gị na njikwa Google Search
Nlele Nyocha Nyocha na Nchịkọta Google
Mar 10, 2009 na 2: 26 PM
Echere m na enyi gị ga-enwe obi ụtọ ịde blọgụ n'ihi na ọ ga-enwe nnwere onwe ide ihe ọ chọpụtara ma kwenye onwe ya. Anaghị m ekwu na ezi edezi abụghị ihe ziri ezi na ụlọ nke anọ nwere ike inye; ọ dị ka ọ bụ n'oge, ọ naghị eme. Enwere ezigbo ezigbo ederede na ozi sitere na ndị na-ede blọgụ na ọtụtụ ihe mkpofu; ịbụ onye maara ihe na nghọta na-agụ ihe dị mkpa.